Letter from Europe - European External Action Service
EEAS > Myanmar (Burma) > Letter from Europe
Soe Yu Naing is an Erasmus Mundus scholar pursuingamaster's degree in Infectious Diseases and One Health in Spain. He has shared some of his experiences of living and studying abroad in Europe during COVID-19 .
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီး ပာာ ကျွန်တော်တို့ဘ၀ပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ် - ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ခရီးသွားပုံ၊ လူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပုံတွေကိုပါ ပြောင်းလဲသွားစေတယ်လေ။ Infectious Diseases and One Health မပာာ ကျောင်းသားတစ်ယောက် အတွက် ကော စပိန်မှာ စာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဒီကပ်ရောဂါပာာ သက်ရောက်မူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း ကျွန်တော်က အချိန်ကောင်းမှာဘဲ ဒီ ကူးစက်ရောဂါအထူးပြု ဒီမပာာဘွဲ့ ကို သင်ယူနေရတယ်လို့လဲ ခံစားမိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလမှာ ၀ူပာန်မြို့ရဲ့ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ရောဂါကူးစက်နေတာကို အတန်းထဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ကို ရေးရေးထင်ထင် မှတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးထင်လိုက်တာက ဒီပာာက ပပျောက်သွားမယ်ပေါ့။ မကြာခင်မှာပါပဲ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) က ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်လို့ ကြေညာလိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတော့ ကပ်ရောဂါ အသွင်ကို ကူး ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပတွင် ကူးစက်မူ အသစ်တွေ များလာတာနှင့်အမျှ မျက်နှာဖုံး နှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမူ ပစ္စည်းများ က စျေးဆိုင်တွေမှာ ရှားပါးကုန်ဖြစ်လာပါတယ်။ အိမ်သာသုံးစက္ကူများသည်လဲ အလိုအပ်ဆုံး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ စျေးဆိုင်မှ စင်တွေအားလုံး ရှင်းလင်းနေခဲ့ပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပာာလဲ ကြောက်ရွံမူ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မူ များဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပျက်သုန်းမူအသွင် ပုံရိပ်ကတော့ ကျွန်တော့် အာရုဏ်မှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အရာရာ အားလုံးပာာ မသေချာမူ၊ စိတ်ပျက်စရာများ ဖြစ်လာနေချိန်မှာဘဲ သေဆုံးမူများက လဲတရိပ်ရိပ်တက်လာခဲ့တာ နေ့စဉ်လို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ စပိန်နိုင်ငံ မှာ ကျွန်တော်အပါအဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူများပာာ အပြင်မထွက်ဘဲ အကျယ်ချုပ်ထားရှိခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကံကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် ကျွန်တော် ကတော့ သီတင်းပါတ် ၁၀ ပါတ်ကြာ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိခြင်းကို အကောင်းဆုံးအနေအထား ကနေ ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ပြောရမှာပါဘဲ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ မပာာဘွဲ့ အဖွဲ့ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ်၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလဲဖြစ်တဲ့ နယ်သာလန်က သူငယ်ချင်း နဲ့ စပိန်မှာ တူတူပိတ်မိနေခဲ့တာလဲ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခက်အခဲ အချိန်မှာ စိတ်ကျန်းမာဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်ကို မဖြစ်မနေထည့်ခဲ့ကြတယ်။ သင်ကြားမူပုံစံ တွေပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အင်တာနက်မှ အဝေးသင်စနစ်ကို လုံး၀ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အမျှ ကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ် ဖိအားများတဲ့ သတင်းတွေ၊ ကူးစက်မူတွေ အလွန်အမင်းတိုးလာတဲ့ သတင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ အတွက် အနာဂါတ် နှင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ စိတ်ပူပန်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တရားဝင် ကူးစက်မူမရှိသေးပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ မြန်မာပြည်ရယ်၊ နယ်သာလန်ရယ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒီရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး ဘယ်လို ပြင်ဆင်ကြ၊ ကိုယ်တွယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ နည်းစနှစ်ကို​ ဖလယ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ ခက်ခဲမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာ မီးပွားလေးကိုတော့ ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမူ နှင့် ကူးစက်ရောဂါ သုတေသန ကို ကျွန်တော်တို့တွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပဲ။ ဒီသုတေသန က ထို ရာသီဥတုပြောင်းလဲမူ ရဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေပြန့်ပွားမူတွင် သက်ရောက်မူအပေါ် ပြည်သူလူထုရဲ့ အသိဉာဏ်၊ သဘောထားနှင့် သညာ သဘောပေါက်ခြင်း ကို စမ်းသက်စစ်ဆေးမူဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုတေသန အတွက်က အချိန်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီ လုပ်ငန်းလေ့လာမူမှာ မြန်မာ၊ နယ်သာလန်၊စပိန်၊ ယူကေ၊ နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ အများဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ သုတေသနက ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေကိုယူထားသော်လည်း တစ်ဖက်မှာလဲ နိုင်ငံတကာ၏ ကပ်ရောဂါအပေါ် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုထိန်းချုပ် စီမံနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒီပရောဂျက်လေးက နေရာအနှံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ နှင့်အတူ ပြန်လည်ဆုံစည်းစေခဲ့တယ်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးပာာ ပိတ်စို့မူတွေ၊ တားစည်းမူတွေအရ ရုပ်အနေအထားမှာဝေးကွာသွားခဲ့တယ်။ သို့ပင်သော်ငြား ဒီကပ်ရောဂါကြီးကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်တော့ ကမ္ဘာအနှံမှ လူသားအားလုံးစုစည်းပါဝင်ခြင်းပာာလည်း ကမ္ဘာကြီးကို သေးသေးလဲ ဖြစ်နေစေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်း ပာာ အခက်ခဲဆုံးသောခရီး မဖြစ်နိုင်သောအရာတစ်ခု အထိ​ အကြောင်းဖန်လာပြန်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာတော့ ရောဂါပြန့်ပွားမူလျှော့ကျစေဖို့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ အိမ်မှာနေခြင်း၊ လူခြားနေခြင်းတွေကို ပြုမူရတာပေါ့။ မေလ တစ်ရက်မှာဘဲ ပါရီမြို့ရှိ မြန်မာ သံရုံးက ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်။ ရင်တွေခုန်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှိသမျှအားအင်တွေ ထုတ်သုံးပြီး အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မေ ၂၂ ရက်မှာဘဲ အီတလီမှာပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာတွေရယ်၊ ဥရောပလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥရောပ နိုင်ငံသားတွေ နှင့်အတူ ပြည်တော်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပာာလဲ ခုနကပြောသလို မြန်မာပြည်ကော ဥရောပဘက်ကကော နိုင်ငံတော် နှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့်က ၂၁ရက် quarantine (ခွဲခြားထားခြင်း) ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကိုရောက်နေပါပြီ၊ နှစ်ခါ စစ်ဆေးချက်များကလည်း ပိုးမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ quarantine (ခွဲခြားထားခြင်း) တာဝန်ကို တော့ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရဖို့လိုတာပေါ့။
နောက်ပြန်လည့်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း (သို့) ရှေ့သို့ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ဒီကပ်ဘေးကြီးက ကျွန်တော်တို့အတွက် အဆိုးအကောင်း သင်ခန်းစာတွေ ထားခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီပာာက အားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာ နှင့် နိူးကြားလာအောင် သတိပေးမူပါပဲ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရူ့ထောင့်မှ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေပာာ ဒီလို ရောဂါပျံပွားမူ အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါဘဲ။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရယ် အားလုံးက ဒီ COVID-19 အတွက် အတူတူ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတာရယ်၊ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိူးဆက်တွေကို လျှော့ချဖို့ အတူတူလုပ်ဆောင်နေတာပာာလည်း ကြည်နူးစရာပါနော်။
Erasmus ပညာတော်သင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် ဥရောပနိုင်ငံတွေ ရောဂါဘယ်လိုထိန်းသိမ်း ပြီး ၊အကျိုးဆက်အတွက် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေး အထူးသဖြင့် ရောဂါထိန်းချုပ်မူစောင့်ကြည့်ပြင်ဆင်မူလုပ်ငန်းတွေမှာ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် မြန်မာတို့ ပူးပေါင်း​ ဆောင်ရွက်မူတွေပာာ အလွန်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ကြုံရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း စပိန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အတွေ့အကြုံအတွက်လည်း စိတ်ထဲမည် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။